News - Gịnị bụ The Asatọ Categories Of Ọgwụ Ebu?
Gịnị Bụ The Asatọ Categories Of Ọgwụ Ebu?
(1) Ọkpụkpụ akụkụ ndị na-ebu otu ahịrị
Mgbe ebu ahụ meghere, ihe na-akpụ akpụ akpụ akpụ akpụ na-ekewapụ, nke mere na ewepụtara akụkụ plastik, nke a na-akpọ otu akụkụ nkewa nkewa ma kpọọkwa ya mpempe akwụkwọ okpukpu abụọ. Ọ bụ ụdị ngwugwu ọgwụ kachasị mfe. Enwere ike ịhazi ya dị ka ihe nkedo nkedo oghere ma ọ bụ ihe mkpuchi ọtụtụ oghere dị ka achọrọ. Ọ bụ akụrụngwa ogwu na-ejikarị.
(2) Ugboro abụọ kewaa elu ogwu ebu
Ugboro okpukpu abụọ nke nkedo ogwu nwere uzo abuo. E jiri ya tụnyere otu nkewa nke na-ekewasị ihe nkedo, okpukpu okpukpu abụọ nke na-akpụzi na-agbakwunye efere nke dị n'etiti (nke a na-akpọkwa efere ọnụ ụzọ na-agagharị) na akụkụ akụkụ ahụ. Ejiri ọnụ ụzọ ámá, ndị na-agba ọsọ na akụkụ ndị ọzọ na ihe ndị dị mkpa maka ihe eji edozi), ya mere a na-akpọkwa ya ụdị mbadamba atọ (efere na-agagharị, efere etiti, efere edozi) nke a na-ejikarị maka ọnụ ụzọ otu na-eri nri. Ebu ma ọ bụ ọtụtụ oghere na-akpụzi ebu. Mgbe emepere ebu ahụ, a na-ekewapụta efere etiti site na ndebiri edozi na ebe dị anya na ntuziaka akwụkwọ nke ebu edozi iji wepu condensate nke usoro ntanye dị n'etiti ndebiri abụọ ahụ. Ugboro abụọ kewaa elu ọgwụ ebu nwere mgbagwoju anya Ọdịdị, elu n'ichepụta na-eri, na ike akụkụ nhazi. A naghị ejikarị ya eme ihe maka ịkpụzi nnukwu ngwaahịa plastik buru ibu ma ọ bụ buru ibu.
(3) Ọgwụ na ịkpụzi na m nwara akụkụ na isi Anam Udeme usoro
Mgbe akụkụ plastik nwere oghere n'akụkụ ma ọ bụ n'okpuru, ọ dị mkpa iji isi ma ọ bụ ihe mmịfe nke nwere ike ịmegharị n'akụkụ. Mgbe ịkpụzi ya, a na-ebu ụzọ ebugharị ebu ahụ n'ebe dịtụ anya, wee sụgharịa akụkụ ahụ gbagọrọ agbagọ na-eme ka ihe mmịfe ahụ pụọ, ma n'otu oge ahụ, onye na-amanye usoro ntụgharị ahụ na-eme ka efere efere iji mezie akụkụ plastik ahụ. Wepu isi.
(4) Ọgwụ na ịkpụzi ya na ibugharị kpụrụ akụkụ
N'ihi ụfọdụ ihe owuwu pụrụ iche nke akụkụ plastik, a chọrọ ịkpụzi ebu na ihe ndị na-akpụgharị akpụgharị, dị ka ebu ebu ebu ebu, ebu ebu concave, ihe ntinye na-agbanwe agbanwe, ihe nkpuchi ma ọ bụ mgbanaka, wdg. site na akụkụ plastik.
(5) Akpaka na-ebudata ihe nkedo na-akpaghị aka
Maka akụkụ plastik nwere eri, mgbe achọrọ ịkpụzi akpaka, enwere ike ịtọ ntọala ma ọ bụ mgbanaka a na-agbanwe agbanwe na ebu ahụ, na-eji mmeghe mmeghe ma ọ bụ usoro ntụgharị nke igwe na-akpụzi ọgwụ, ma ọ bụ ngwaọrụ nnyefe pụrụ iche iji kpụgharịa eri ahụ isi ma ọ bụ mgbanaka mgbanaka na-atụgharị iji hapụ akụkụ plastik.
(6) ebu n’agba ọsọ na-enweghị ọsọ
Ihe na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-ezo aka na usoro nke adiabatic kpo oku nke onye na-agba ọsọ iji mee ka plastik dị n'etiti oghere na oghere nke igwe ịkpụzi ọgwụ na-agbaze na steeti a wụrụ awụ, nke mere na ọ dịghị condensate na usoro ịwụfu ahụ mgbe ewere akụkụ plastik puta na mgbe etolite ebu. A na-akpọ nke mbụ adiabatic onye na-agba agba ọgwụ, na nke akpọrọ nke abụọ akpọrọ onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ.
(7) Ọkpụkpụ akuku akuku aka nri
Ọkpụkpụ nkuku akụkụ aka nri kwesịrị ekwesị maka igwe ịkpụzi nkuku akụkụ. N'adịghị ka ndị ọzọ na-akpụzi ebu, na nri direction nke a ụdị ebu n'oge ịkpụzi bụ perpendicular ka oghere na mmechi direction. A na-edozi ụzọ isi ya dị n'akụkụ abụọ nke na-agagharị ma na-edozi ya, na mpaghara mpaghara ya na-adịkarị mgbe niile. Nke a dị iche na ebu ọgwụ ndị ọzọ. Ọgwụgwụ nke isi na-asọpụta ụzọ bụ igbochi igwe ịkpụzi ọgwụ. Onu ogugu na uzo onu ogugu nke isi uzo na-adighi nma, ma enwere ike inye ihe ntinye uzo ozo.
(8) moldkpụzi akpụzi akpụ akpụ akpụ akpụ n'igwe na oghere edozi (Oghere)
N'ọtụtụ ebu ebu, a na-etinye ngwaọrụ ejection n'akụkụ akụkụ nke ebu a na-akwagharị, nke na-arụ ọrụ nke ngwaọrụ ejection na oghere na mmechi usoro nke usoro ịkpụzi ọgwụ. Na mmepụta n'ezie, n'ihi na ụfọdụ akụkụ plastik na-ejedebe site na ọdịdị, ọ ka mma ịhapụ akụkụ plastik n'akụkụ akụkụ nke ebu ahụ edozi. Nke a na - eme ka akụkụ plastik si na ebu ahụ pụta, yabụ a ga - edozi ya n'akụkụ akụkụ ahụ edozi. igwe.
Osote: Gịnị Bụ Ebu Ala?
Nke gara aga: Plastic Ọgwụ na ịkpụzi shrinkage